Dhageyso: Barnaamijka Caafimaadka Iyo Ramadaanka Oo Looga Hadlayo Cuntooyinka Uu Qaadanayo Qofka Sooman – Goobjoog News
Barnaamijka Caafimaadka iyo Ramadaanka waxaan oga hadleynaa Maanta qeybtiisa 1-aad Cuntooyinka loo baahanyahay in uu qaato qofka Soomaan iyo kuwa aan loo ogoleyn in uu qaato Caafimaad ahaan.
Xilliyada Soonka waxaa is badala jadwalka Cuntada ee qofka uu qaadan jiray, waxaa jira Cuntooyinka qofka Soomaan u keeni karo dhibaatooyin caafimaad haddii uusan ka taxadarin Nuuca cuntada uu qaadanayo.
Sidoo kale waxaa jira Cuntooyin u wanaagsan qofka Soomaan, kuwaasi oo ay ku jirto caafimaadka qofka Soomaan.
Haddaba qofka Soomaan cuntooyin Ceynkee ah ayuu qaadanayaa,, Cuntooyinkee aan loo ogoleen qofka inuu qaato, Barnaamijka Ramadaanka iyo Caafimaadka oo uu soo jeedinayo Dr Cabdullahi Cusmaan Naaji ka bogasho wacan.
Halkaan Ka Dhaqeyso Barnaamijka Caafimaadka Iyo Ramadaanka.